Karachi, International Industries Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 18, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the ...
Karachi, Packages Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 24, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the company has decl ...
Karachi, Tri-Pack Films Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 18, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the company h ...
Karachi, Rafhan Maize Products Company Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 15, 2019 at Faisalabad. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Furt ...
Karachi, Rupali Polyester Limited informed Pakistan Stock Exchange that Board of Directors meeting of the Company will be held on April 15, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the 3rd Quarterly Accounts for the period ended March 31, 2019. Further, the comp ...
Lahore, April 08, 2019 (PPI-OT): Pakistan Hosiery Manufacturers Association (PHMA) has announced to participate in the Second Edition of the TEXP0 2019, which is being held first time in Lahore at Expo Centre from April 11 to 14, with major display on value-added knitted garme ...